Call for UN action on Zimbabwe - Bulawayo24 News
Call for UN action on Zimbabwe
12 Feb 2017 at 20:29hrs | Views
The petition reads: 'With mounting unrest in Zimbabwe, we urge you to appoint a Special Representative to prepare the ground for a UN Transitional Authority to take over from the failed Mugabe regime. We look to the Special Representative to initiate comprehensive negotiations so that the UN Transitional Authority can assume control of Zimbabwe's administrative structures - foreign affairs, defence, security, finance and communications - to ensure a level playing field conducive for credible national elections.'
Why do we want outside intervention when we are told that discussions about a coalition to oppose Mugabe in the elections are still on course despite the split in Mujuru's party? To us the key issue is the election modalities and we are not convinced by the progress claimed by the Zimbabwe Electoral Commission.
Source - Zimbabwe Vigil
More on: #Zimbabwe, #Action